China Cold Therapy Sokisi fekitori uye vagadziri | Huanyi
kutonhora kurapwa masokisi
Kune iwo anotonhora kurapwa masokisi, fekitori yedu ine hukuru hwakasiyana uye sarudzo dzeruvara, semuenzaniso ice bhuruu, tiffany bhuruu, pepuru, pingi, girini, nhema. Isu tine tsika chena kana nhema nhema tambo ine velcro, akawanda mapakeji mazano aunosarudza.
Taura nesu kuti uwane matsva emitengo yemitengo!
Nyore Kushandisa Cold Therapy Masokisi Ekutarisira Kwemakumbo: Zvakareruka uye zvinobudirira, edu anotonhorera masokisi ane gel chando mapaketi ndiyo yakanaka kumba-inotonhora kurapwa mhinduro yekuzorodza mumaminetsi.unogona kusanganisira akasiyana chimiro gel mapake ane kana kana asina kumanikidza mitsara, ese ari pasi peiyo 150kgs kumanikidza kuyedzwa uye kuve nechokwadi kuti haina chero kubuda.
1.Zvigadzirwa zvako zvakachengeteka zvakakwana zvekudya kana muviri wemunhu?
Zvese zvedu zvinhu zvePV, PE, Nylon, Lycra, Gel haina chepfu neFDA, MSDS, CE inoshuma.
2. Chii chinonzi MOQ yako?
Kazhinji MOQ inowanzo kuve 1000 kana 2000 mapara. Kana tichida isu tine machira ejira uye tambo, tinogona kutaurirana zvinoenderana nemamiriro ezvinhu kuti tipe yakanakisa rutsigiro kumutengi kuyedza musika
3. Chii chako kudhinda?
Tinogona kuita sirika yekudhinda yekudhinda, offset kudhinda, UV kudhinda kana kuisa zvitambi Sarudza nzira dzakakodzera dzekudhinda iwe zvinoenderana neyako dhizaini.
4. Ndeipi yako yekubhadhara nguva?
bhadhara makumi matatu muzana chiyero mushure meodha dzakasimbiswa naT / T. Tinogona kugamuchira L / C zvinoenderana neodha yakawanda.
5. Unogona here kupa yemahara sampuli?
ehe chidimbu chemasampuli emahara chako kana zvinhu zvichitorwa. Kana uchida tsika logo yako kana yako chimiro, tinoda kukurukura masampuli 'muripo zvichienderana nekudhinda kana modhi mutengo.
Pashure: Vana chando kurongedza
Zvadaro: ice mitten
Tsoka Ice Rongedza
Rutsoka Therapy Ice Packs
Gel Inonyaradza Masokisi
Ice Packs YeMakumbo